I-Kasco Golf: iNkampani, iiKlabhu zayo, apho zizakuzifumana khona
I-Kasco Golf igumbi legalufa kunye nomvelisi wezinto zokusebenza eJapan. Iwebhusayithi ye-Kasco yehlabathi ifumaneka kwi-kascogolf.com.
UKasco uncedisa inkampani yaseJapan iMamiya-OP. Qaphela igama elithi Mamiya? Olunye lwabaxhasi balo liyi-golf shaft yomkhiqizi owaziwayo, USTMamiya.
Kuphi iiClubs zeKasco zeGolf kunye nezixhobo ezithengiswayo?
Ngombulelo kwi-Intanethi, abagadi begalufa kwihlabathi jikelele banokuthenga iiklabhu zeCasco nezixhobo.
Umzekelo, uKasco uthengisa ngqo kubathengi.
Iiklasi ze-golf zeKasco zithengiswa kwiivenkile zezitena kunye nempahla yokuthengisa eJapan, eChina kunye namazwe amaninzi ase-Asia-mpuma ye-Asia kunye namanye amazwe aseYurophu (kuquka ne-UK, iFransi neJamani).
I-Kasco ayinayo okwangoku ebonakalayo e-United States, nangona ikhona ngaphambili.
Yisiphi Isixhobo Sokuthi I-Kasco Golf yenza?
UKasco wenza into enhle kakhulu:
Umgca ogcweleyo weeklabhu: Abaqhubi, imithi, i-hybrids, irons, i-wedges kunye ne-putters, kunye neeklabhu ezijoliswe kubafazi begalufu;
Iibhola zeGalofu (ngemibala emininzi, kunye nezinye eziza ngobuso obuhle);
Izixhobo ezifana neiglavu zegalufu, iibhegi kunye neesebrala;
Impahla yegalofu, imvula kunye nomoya, iinqwelo, amabhande.
Imbali emfutshane yeKasco Golf
Imvelaphi yeKasco yeGolf igcina iiglavu. Ayikho iglafu yegalufu, kodwa iiglavu ezizimeleyo zowesifazane. I-Kasco yasungulwa ngo-1959 ukwenza iiglavu ezifanelekileyo. Yaphendukela kwiiglavu zezemidlalo emininzi kwiminyaka kamva, kwaye yaqala ukwenza nokuthengisa iiglavu zegalufu eJapane ngo-1964 phantsi kohlobo lweKhamatari Sports Company.
Ukuthumela ngaphandle kwegalufa zayo zegalufu kwaqala ngowama-1965, kwaye ngo-1972 igama lomtshintshintshintshi laguqulwa libe yiKasco (isicatshulwa seKhamatari Sports Company).
I nkampani yaqhubeka yenza iiglavu nezinye iimidlalo, ngokunjalo, njengebhokisi lebhola lebhola, kodwa ukwandiswa kweminikelo yakhe yegalufu yaqala ngokunyanisekileyo kuma-1980.
Iingxowa zokuqala zegalufu zaseKasco zafika ngo-1980; iibhola zokuqala zegalufa ngowe-1982.
Ukwenziwa komgangatho wokuqala weeklasi zegalu zeKasco kwaqala ngowama-1991, kwaye iqela lokuqala laseKasco lafika kwiivenkile zaseYapan ngo-1992.
Ukusetyenziswa kokuqala kwe-Kasco ye-alloy ebizwa ngokuthi "Super Hyten" kwiiklabhu zegalufu ngo-1994; inkampani iqhubekile ukuphucula kunye nokuphucula i-alloy phakathi neminyaka kwaye ezinye iiklabhu zeKasco namhlanje zibandakanya iinguqulelo zesizukulwana se-Super Hyten.
I-Kasco yaziwa kwakhona kwii-2000s zakuqala kwiiklabhu zayo zesebenzayo-oko sikubiza namhlanje kwiiklabhu ze-hybride - okokuqala evezwe ngalo ngo-1999. UKasco wayengenye yeenkampani zokuqala ezenza igama ngokwazo kwiimveliso, kunye nenkampani wazisa amakilabhu eUnited States iminyaka emininzi ngelo xesha.
Ngo-2003, i-About.com Golf igxininise iKlaco yeK2K E-spec Utility Club, kwaye ndabhala ngelo xesha, " Ndiyibetha iqela le- divots , i-divots-filled filled divots, i-sandunk bunkers kunye nokugqithisa okukhulu, kunye neklabhu eyenziwa njengentengiso : ukuhamba kwebhola ephezulu, ibhola lebhola elifanelekileyo, ukuhamba ngokukhawuleza. Ndiyibetha iqela kwi-tee, kwaye yenze ngcono. "
UMamiya-OP wathola uKasco njengenkxaso-mali ngo-2010.
Indlela yokuqhagamshelana neKasco Golf
Qala ngokundwendwela iwebhusayithi yehlabathi kwiascogolf.com. Ukuthumela i-imeyile, nqakraza "Thaqhagamshelwano" kwithebhu.
Cofa kwi-"Abathengisi" ithebhu ukujonga indawo, idilesi zeposi, iinombolo zefowuni kunye, kwezinye iimeko, iiwebhusayithi zeSasco abasabalazi e-Asia naseYurophu.
NgoSheila Thelen's Championship Skating Harness
Usuku lokutshabalalisa iChina
Fundisa iMelika - iProfayili
Iingoma eziphezulu ze-10 zeePop zohlobo lwasehlobo 2010
10 I-Etiquette yokuTyhulwa Iingcebiso zokuBela iDuba
Ukuphulaphula Ukuqonda nokuSebenzisana nokuFundiswa kwabafundi baseFrentshi
Iimpawu zeMoto zeNgqungquthela kunye neeMpawu zeHood
Phezulu 'Ii-80 zeengoma ze-Human League
U-Toyo Ito, Umqambi ongenakunelisekanga
Ukulinganisela kweBhola yakho yeBhotile?
Indlela yokudibanisa "iDeranger" (Ukuphazamiseka)
Imidwebo yeNtshukumo entsha yeNqulo
Indlela Yokuqhuba Udliwano-ndlebe Ngophando